သင်သည်အဘယ်သို့ရဲကရပ်တန့်သို့မဟုတ်အဖမ်းခံရလျှင်လုပ်ဖို့ | USAHello
It is important to know your rights if you are stopped byapolice or immigration officer or if you are arrested by police. If you are questioned by law enforcement, be polite and respectful. မုသာမဘယ်တော့မှမ, ဆငျခွေကနျ, ခုခံ, or run away.
USA တွင်, the police are generally good and want to help you. But you should know your rights. You have rights even if you are notaUS citizen. You should know that law enforcement officers may briefly hold and question you if they suspect you were involved inacrime. They might do this even if there are not enough reasons to arrest you.
When receivingacitation (a ticket for speeding, ဥပမာ) you must provide your driver’s license, အာမခံ, and vehicle registration if requested.
အဆိုပါအရာရှိကကားတစ်စီးထဲကခြေလှမ်းရန်သင့်အားမေးနိုငျ. You should do what they ask.
A pat down is typicallyasurface search done over your clothes. It can happen if the officer hasareason to believe there is something suspicious happening, ဒါပေမဲ့သူသို့မဟုတ်သူသည်သင်၏အိတ်ကပ်ကတဆင့်မသွားနိုင်. တစ်ရှာဖွေရေးအတွက်, they haveamore thorough method where they might search under your clothes. သငျသညျတရားဝင်သူတို့ကိုနှစ်ခုစလုံးငြင်းဆန်ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်.
သငျသညျကိုလုပ်ခွင့်ပေးထားပါသည်3အတွင်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှု3အဖမ်းခံရတဲ့နာရီ.
မည်သူမဆိုပေမယ့်သင့်ရဲ့ရှေ့နေနှင့်သင်၏လူဝင်မှုအဆင့်အတန်းနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးရန်မနေပါနဲ့.
ဥပဒေဘက်တော်သားကသင်၏ခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ်တစ်ရှာဖွေရေးရမ်းမပါဘဲသင့်အိမ်ရှာဖွေခွင့်မပြုပါ. A warrant isalegal document that gives them permission to search. သငျသညျအိမ်ကနေရောက်နေတယ်ဆိုရင်, အချို့သောအခြားသဘောတူညီချက်လျှင်ရဲကသင့်အိမ်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်.
If an officer insists on entering withoutawarrant, do not resist. You can say that you do not allow it, ထို့နောက်ချက်ချင်းရှေ့နေမခေါ်.
ပိုမိုသိရှိလိုပါကသင်သည်သင်၏အခွင့်အရေးများကိုနားလည်ကူညီရန်, သင်လုပ်နိုင်သည် read our “သင့်အခွင့်အရေးများကိုသိ” information. It was prepared in partnership with Church World Services, which offers low-cost legal services to immigrants.
သငျသညျတိတ်ဆိတ်စွာနေရန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအခွင့်အရေးရှိသည်ဒါကြောင့်သင်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်မလိုအပ်ပါဘူး. သင်သည်မည်သည့်အရာရှိများသို့မဟုတ်အခြားမည်သူမဆိုပြောပြရန်မလိုပါ. It isagood idea to talk toalawyer before answering any questions. သင်ရွေးချယ်ရဲအရာရှိဖြေဆိုဖို့မကိုပြောပြပါ. ဒါပေမယ့်အမြဲတတ်နိုင်သမျှလေးစားမှုနှင့်ယဉ်ကျေးဖြစ်.
Try to move slowly and make sure you always keep your hands visible to the officer. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ဦးကဆင်း Pat သို့မဟုတ်ရှာဖွေရေးကိုမဆီးတားပါနဲ့. အဲဒီအစားလို့ပြော, “I do not consent toasearch.” Ask the officer if you are free to leave, နှင့်အရာရှိဟုတ်ကဲ့ပြောပါတယ်လျှင်, then leave calmly. သို့သော်, if the officer says no, you must stay. ပြေးဘယ်တော့မှမ, and keep your hands visible all the time.
သငျသညျထိုကဲ့သို့သောသည်သူ၏အမည်နှင့်တံဆိပ်အရေအတွက်ကအဖြစ်သူ၏သတင်းအချက်အလက်များအတွက်အရာရှိမေးရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်. သကျသခေံရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားပါသင်ကဒဏ်ရာရနေလျှင်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဓါတ်ပုံတွေကိုယူ. ရှေ့နေသို့မဟုတ်သင့်ဒေသခံကလူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးရုံး Call.
နေသောသူ non-နိုင်ငံသားများ 18 နှစ်သို့မဟုတ်အားလုံးအချိန်များတွင်သူတို့နှင့်အတူ၎င်းတို့၏စာတမ်းများကိုသယ်ဆောင်သင့်ပါတယ်အဟောင်းများ. If you are undocumented and cannot show US immigration documents, သင်သည်သင်၏အဆင့်အတန်းနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုဖို့မရှေးခယျြနိုငျ. These questions might include “Are youacitizen?"သို့မဟုတ်, "မင်းဘယ်ကလာသလဲ?” Do not lie about your status, သို့သော်သင်ဖြေဆိုဖို့မရှေးခယျြကြောင့်အစားလို့ပြော.
ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုထံမှလာ ACLU, ဘုရားကျောင်းကမ္ဘာ့ဖလားန်ဆောင်မှုများ, နှင့်အခြားယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းရင်းမြစ်. ဒါဟာလမ်းညွှန်မှုများအတွက်ရည်ရွယ်သည်နှင့်အမျှမကြာခဏတတ်နိုင်သမျှမွမ်းမံ. USAHello ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုမပေးပါဘူး, မဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းများမဆိုဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်. သင်တစ်ဦးအခမဲ့သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းရှေ့နေသို့မဟုတ်တရားဝင်အကူအညီရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ အခမဲ့နှင့်တန်ဖိုးနည်းဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေ.